संक्रमित बढे, सतर्कता शून्य- मधेस - कान्तिपुर समाचार
सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै विद्यालय सञ्चालन, संक्रमितको चाप धान्न गाह्रो हुने विज्ञको चेतावनी
वैशाख ८, २०७८ प्रदेश २ ब्युरो
जनकपुर — दिनदिनै कोरोना भाइरसको संक्रमित थपिँदै गए पनि प्रदेश २ का जिल्लामा स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउन लापरबाही गरिएको छ । बजारमा भीडभाड बाक्लै छ । अनिवार्य गरिएका ठाउँमा मात्र मास्क लगाएको पाइन्छ । सामाजिक दूरी र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरिएको छैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयअनुसार मंगलबार प्रदेशमा ९३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये पर्सामा सबभन्दा बढी ५९, बारामा १४, सप्तरीमा ३, रौतहटमा ६, सर्लाहीमा ३, धनुषा र महोत्तरीमा ३/३ जना संक्रमित थपिएका हुन् । प्रदेशमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ सय ५४ छ । मंगलबार वीरगन्जमा एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ बहुअरीका ५७ वर्षीय पुरुष छन् । उनको उपचारका क्रममा नारायणी वयोधा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सरोज रोशन दासका अनुसार उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो । केही दिनअघि भारतबाट फर्किएका ती पुरुष उपचारार्थ चैत २९ गते भर्ना भएका थिए । २ सातायता संक्रमणबाट पर्सामा ६ जनाको मृत्यु भएको डा. दासले जानकारी दिए । ४ जनाको नारायणी अस्पतालमा २ जनाको वयोधा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
रौतहटका बजार, चोकमा स्वास्थ्य मापदण्डको ख्यालै नगरी निस्फिक्री स्थानीय हिँडडुल गरिरहेकै छन् । उनीहरू मास्क पनि लगाउँदैनन्, भौतिक दूरी पनि कायम गर्दैनन् । प्रशासनले मंगलबार सदरमुकाम गौरमा मास्क नलगाउनेलाई सम्झाउन प्रहरी नै खटाएको थियो । जिल्लाको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारबाट मास्क नलगाउनेलाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । रौतहटमा एक साताभित्र ३० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरू सबै होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । फतुवा विजयपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका ५ जना थुनुवामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले संक्रमण बढ्दै गएकाले त्यहीअनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षामा कडाइ गर्न लागिएको बताए । ‘बजार, चोकजस्ता स्थानमा मास्क नलगाउनेलाई अब जरिवाना गर्छौं,’ उनले भने, ‘संक्रमण रोक्न आफैं सचेत हुनुपर्ने बेला लापरबाही गर्नुहुन्न ।’
बालबालिकामा कोरोना संक्रमण बढेपछि विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै राजविराजका कतिपय विद्यालय मंगलबार पनि सञ्चालन गरिए । सप्तरीमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरू पनि भए । हाटबजारमा भीड छँदै छ । बजार र सरकारी कार्यालयमा पनि मास्क नलगाउनेको संख्या धेरै थियो । नेपाल–भारत सिमानाको तिलाठीको बोर्डरमा सयौं मानिस वारिपारि गरिरहे । संक्रमणको चपेटमा परेका भारतका विभिन्न सहरबाट आउनेहरू मंगलबार पनि बिनास्वास्थ्य जाँच तिलाठी नाका हुँदै नेपाल भित्रिए । न सीमाक्षेत्रमा सतर्कता देखियो न हाटबजारमै ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार पछिल्लो चरणमा सप्तरीका ६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । परीक्षणको दायरा नबढाइएकाले आशंका गरिएका संक्रमितहरूले अझै परीक्षण गराउन पाएका छैनन् । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रणजित झाले परीक्षणको दायरा बढाउने प्रयास गरे पनि प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्तिको अभावमा परीक्षण बढाउन नसकिएको बताए ।
संक्रमितको संख्या बढेसँगै वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा गम्भीर बिरामी पनि बढेका छन् । डा. दासका अनुसार मंगलबार नारायणी अस्पतालको आईसीयू र एचडीयू कक्षमा गरी २९ संक्रमित भर्ना भएका छन् । सबै गम्भीर अवस्थामा रहेको उनले बताए । अस्पतालको आईसीयू र एचडीयू वार्डको शय्या क्षमता ३५ मात्र रहेकाले अब बिरामी थपिँदै गए उपचारमा समस्या हुने भएको छ । पर्सामा करिब ३ सय कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीर खालका बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएकाले समस्या नभएका बिरामीहरूलाई भर्ना नगरिएको डा. दासले जानकारी दिए ।
– शंकर आचार्य (पर्सा), शिव पुरी (रौतहट) र अवधेशकुमार झा (सप्तरी)
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:२८
प्रदेश २ का ५४९ स्थानमा भारतीयको बलमिचाइँ
चैत्र १९, २०७७ प्रदेश २ ब्युरो
जनकपुर — वारिपारि खेत छन्, खोलानाला र बाटो मात्रै होइन कतिपय ठाउँ दशगजामै मान्छेले बसोबास गरेका झुप्रा पनि छन् । नेपाल–भारत सीमाका धेरै ठाउँमा दशगजा कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन नै गाह्रो पर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । सशस्त्र प्रहरीले गरेको सर्वेक्षणका अनुसार प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाका ५ सय ४९ स्थानमा भारतीयले नेपाली भूमिमा बलमिचाइँ गरेका छन् । सप्तरीमा ११, सिरहा २९, धनुषा ३९, महोत्तरी २५, सर्लाही १ सय २, रौतहट ६, बारा ११ र पर्साको ३ सय २६ स्थानमा भारतीयले नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सर्लाहीको मलंगवा–५ भाँड्सरका ६५ वर्षीय समसुल हक भन्छन्, ‘म बालक छँदा घर अगाडि दशगजामा पिलर थियो । अहिले त्यो पिलरै छैन । त्यो ठाउँमा पारिका मान्छेले लगाएको लहलहाउँदो गहुँ छ ।’ पुरानो पिलर ओझेलमा पारेर नयाँ राखिएपछि भारतीयले नेपालतर्फको जमिन अतिक्रमण गरेको उनी बताउँछन् ।
भाँड्सर नेपाल–भारत दशगजा नजिकको गाउँ हो । २०४२ सालमा दुई देशका नापजाँच गर्ने टोली आएर नयाँ पिलर नेपालतर्फ गाडिदिएको हकको दाबी छ । भारतीय पक्षले नेपालतर्फ नयाँ पिलर गाड्दा नेपाली टोलीले प्रतिवादसमेत नगरेको उनले बताए । ‘हामी बोलेका हौं तर हामीले बोलेको कसैले सुन्दैन,’ उनले भने, ‘हामी सीमामा बस्नेलाई पारिबाट हेपेको अनुभव हुन्छ ।’
भाँड्सर नजिक घोरदौरी चौरीमा पनि अवस्था यस्तै छ । त्यहाँ पनि भारतीय पक्षले बलजफ्ती दशगजामै खेतीपाती गर्दै आएको स्थानीय अरुणकुमार यादवले बताए । सर्लाहीमा नेपाल–भारत सीमा १ सय २ स्थानमा मिचिएको तथ्यांक केन्द्रमा छ । तर पछिल्लो नापजाँच भएपछि सीमा स्तम्भ सार्ने वा भारतीय पक्षले बलमिचाइँ गरेको भन्ने जानकारी नभएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले सीमाका बारेमा प्रत्येक दिन सशस्त्र प्रहरीबाट ब्रिफिङ लिने काम भइरहेको बताए । ‘सीमा निर्धारण भएपछि निगरानी प्रत्येक दिन भइरहेको छ, तलमाथि हुने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘दशगजामा पराल राख्ने लगायतका काम दुवैतर्फका नागरिकबाट भइरहेको मैले देखेपछि त्यो हटाउने प्रयास गर्दै छु ।’ धनुषाको जटही, लग्मा, बिर्ताघाटमा दशगजा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भारतीयले खेतीपाती गरिरहेका छन् । सीमा अनुगमन र स्तम्भ मर्मतका बेला दुई देशका सुरक्षा अधिकारीले दशगजा क्षेत्रमा खेतीपातीमा रोक्ने सहमति गर्छन् । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भारतीय नागरिकले बलजफ्ती खेती गर्दै आएको सुरक्षाकर्मीको तर्क छ । भारतीय नागरिकले दशगजा क्षेत्रमै धान, गहुँ र दलहनलगायत बाली उब्जाउँदै आएका छन् । सीमा क्षेत्रमा लगाइएको खेती एकपक्षीय रूपमा मास्न पनि नमिल्ने भएकाले नेपाली पक्ष चुपचाप छ । सशस्त्र प्रहरीले यसबारे उच्च तहमा जानकारी गराए पनि दशगजा खाली गराउन उच्च तहबाटै पहल नभएको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए ।
नेपाली पक्षबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न आइपुग्ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले भने भारतीयलाई दशगजामा खेती गर्न छुट दिएका छन् । भारतीयले निर्बाध खेती गरिरहेका क्षेत्रबाट साना र मझौला स्तम्भहरू हराउने समस्या बढेको सुरक्षाकर्मी बताउँछन् ।
रौतहटका सीमावर्ती गाउँमा भारतीयले वारि खेती गर्ने गरेका छन् । यो चलन नयाँ होइन । इशनाथ–१ बन्जाराहाका बिगु साहले सीमा क्षेत्रको बलुवा गाउँका प्रदीप साहलाई आफ्नो एक बिघा खेत बटैयामा कमाउन दिएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । उनले बाली लगाउन नभ्याएपछि भारतीयलाई अधियाँमा खेत दिएका छन् ।
बन्जाराहाको सीमा क्षेत्रका एक दर्जन स्थानीयले भारतीयलाई बटैयामा खेत कमाउन दिएका छन् । यो क्रम विगत डेढ दशकदेखि चलिआएको इशनाथ–१ का वडासदस्य गिरिशनन्दन सिंहले बताए । ‘सीमामा दशगजा क्षेत्र बाहिर नेपालीको खेत कमाउन भारतीय आउँछन्,’ उनले भने । मजदुरको अभाव र समयका कारण नेपालीले भारतीयलाई आधा बाली लैजाने गरी बटैया दिँदै आएको सिंहले सुनाए ।
रौतहटको वाग्मतीदेखि इशनाथको बन्जाराहा–औरैयासम्मको ३२ किलोमिटर बाँध र सीमा क्षेत्रको दशगजा नजिक अधिकांश नेपालीका जमिन भारतीयले कमाउँदै आएका छन् । धान, मकै, मसुरो, गहुँलगायत बाली लगाउँदा उनीहरूले आफ्नो लगानीमा उब्जाएर फसल आधा/आधा गर्छन् । सीमासित जोडिएको नेपालतर्फका राजदेवी, गौर, परोहा, इशनाथमा जमिन बटैया दिने चलन पुरानो भएको साहले बताए ।
‘हाम्रा गाउँघरका मजदुरहरू कमाउन भारत गएका छन् । आफूले खेती गर्न खोज्दा काम गर्ने मान्छे नै पाइँदैन । त्यही भएर बटैया दिएको हुँ,’ उनले भने । यसरी बटैया गरेकोबारे स्थानीय प्रशासनलाई कुनै चासो छैन । राजदेवीको ब्रह्मपुर, लक्ष्मीपुर बेलबिछुवा क्षेत्रका नेपालीको पनि जमिन बटैयामा दिइएको स्थानीयले बताएका छन् ।
-ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट) र सन्तोष सिंह (धनुषा)
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ १२:२७